Sida loo soo dejinta Xvid / DivX in Lugood Maktabada (Windows 8 ka mid ah)
Files DivX iyo Xvid waxaa sida caadiga ah Tifaftirayaasha files video dheer in hayn heer sare ah si faahfaahsan, laakiin dhibaatadu waxaa weeye in ay inta badan uma lihin u ciyaaro ee ku saabsan barnaamijyada kale ee software warbaahinta sida Lugood. Lugood kaliya taageeraa MP4, MOV, M4V videos encoded la H.264 ama MPEG-4.
Waxaa laga yaabaa inaad leedahay maktabad ballaadhan oo files movie bixi la DivX ama Xvid encoded, laakiin si aan u daawado aad caadi ahaan u leeyihiin in ay soo bixi software kale ama codecs. Iyo inay iyaga ka ciyaaro Lugood, ayaa sidoo kale aad u leeyihiin in ay isticmaalaan qalab dhinac saddexaad si ay kaaga caawiyaan in aad loogu badalo Xvid / DivX in Lugood qaabab taageeray. In this article, waxaan inta badan aad baro sida si fudud u dajiyaan DivX / Xvid in Lugood leh Converter ah Xvid / DivX in Lugood, si aad u ciyaari karaa oo maamuli Xvid / DivX files ee Lugood iyadoo wax dhibaato ah.
Qaybta 1aad: Sida loo badalo Divx / Xvid in Lugood Iyadoo Video Converter Wondershare
Qeybta 2: Free Divx / Xvid in Lugood Converter
Qeybta 3: Online Divx / Xvid in Lugood Converter
Qeybta 1: Hel Best & Professional Xvid / DivX in ay Lugood Converter
Professional video Converter: Waxa kaliya ma ahan badasha Divx ama Xvid in Lugood, laakiin sidoo kale waxa ay taageertaa qaabab dheeraad ah oo ay ka mid yihiin AVI, MP4, MKV, MOV, FLV.
Wax soo saarka video tayada sare: Waxaad si Lugood badalo kartaa videos qaabab la jaan qaada AAN tayada khasaaro.
Sida dhaqsaha badan Conversion Speed: Iyadoo 30 X dhaqsiyaha badan xawaaraha diinta, waxaad ku dhameysan kartaa diinta video ah oo kaliya dhowr daqiiqo.
Xoog video editor: Edit videos leh tafatirka sare sida falinjeeerka, lana siii, isagoo intaa ku daray saamaynta ama watermark, iwm
Guba video inay DVD: Waxay kaa caawinaysaa inaad ka samaysaa DVD ah xirfad la arrimo DVD menu buil-in.
Download online videos: Waxaad u isticmaali kartaa inaad kala soo baxdo videos ka YouTube, Netflix, Vemo, iyo goobaha la wadaago video kulul kale.
Sida loo badalo Xvid / DivX in Lugood
In interface ugu weyn ee app this, waxaa jira ee button laga heli karaa si aad u dajiyaan files DivX ama Xvid. Haddii aad DivX ama Xvid files waa soo dhow yahay, si toos ah jiidi oo hoos u files bartilmaameedka barnaamijkan. Markiiba, aad arki doonaa oo dhan files doonayo waxaa lagu daray in ay leeg- bidix ee app this, muujisay sida soo socota.
2. Dooro ah Lugood qaab saaxiibtinimo sida qaab wax soo saarka
Waxa aynnu og nahay, Lugood taageertaa M4V qaab la codec H.264. Sidaas halkan, waxaan qaadan kartaa M4V tusaale ahaan. Hadda, waxaan ku tusi doonaa sida loo doorto M4V sida qaab wax soo saarka iyo dhigay codec H.264 in app this.
Riix image qaab dhinaca midig ee interface in ay arbushin ilaa ay "Qaabka Output" window. Halkan, waxaad dooran kartaa qaab M4V hoos yaala qaybta ka ah "Qaabka"> "Video", ka dibna dooran H.264 ee "Video Encoder" doorasho garaacida "Settings" marsho icon ah. Haddii aad soo dhoofsadaan dhowr files regelingen si loogu badalo, inaad sameyso goobaha kuwaas oo loogu talogalay video kasta. App Tani si toos ah u codsan doonaa goobaha la mid ah si ay u dhan video files.
3. badalo DivX / Xvid in Lugood
Markii wax walba waa ok, ee geeska midig hoose oo ka mid ah ay Converter Video 's interface, kugu dhuftay kartaa "Beddelaan" badhanka si ay u bilaabaan diinta video. Hadda, waxa aad ka arki kartaa bar horumarka diinta la Buuxi iyo dhamaystirka soo bandhigay Boqolkiiba waqtiga.
Markii diinta lagu sameeyo, abuurtaan Lugood, oo waxaad u tagtaan "File"> "Add File inay Library" dedeg folder wax soo saarka si ay u dajiyaan oo dhan files wax soo saarka, ama u tag "File"> "Add Folder inay Library" si dejinta folder wax soo saarka halkii.
Video Tutorial: Sida loo Isticmaalo Divx / Xvid in ay Lugood Converter
# 1. Free Divx / Xvid in Lugood Converter Wondershare Video Converter Free
Waxaa aad u sahlan in ay isticmaalaan oo lacag la'aan ah Divx / Xvid in Lugood video Converter. Waa awood diinta video in Lugood qaabab socon sida MOV, M4V, iyo MP4. Waxa kale oo aad isticmaali karto si aad xaalkaa videos, download online videos.
Pro: 100% xor ah Divx / Xvid in Lugood Converter, oo isu qalab diinta video.
1. Waxaad kaliya u isticmaali karaan in ay keenaan si caadi ah videos. HD iyo 3D videos aan la heli karin. Iyadoo hawsha waa gudahood Video Converter Ultimate ah.
2. Tayada video saarka ma u fiican yahay sida Video Converter Ultimate.
3. Ma jiraan wax soo saarka presets video.
4. Waxaad ma isticmaali karaan si ay u gubaan video inay DVD.
> Resource > Beddelaan > Xvid / DivX in Lugood: Sida loo soo dejinta DivX / Xvid Faylal ay si Lugood Library Your